Narcissus ပန်းများ - Daffodils နှင့် Jonquils ကိုဂရုစိုက်ပါ - မီးသီးများ
Narcissus ပန်းများ - ဥယျာဉ်ကိုတောက်ပစေရန် Daffodils နှင့် Jonquils
အားလုံး Narcissus ပန်းများအကြောင်း
အလင်း & အပူချိန်
Q: ရှဥ့်များသို့မဟုတ်ကြွက်များသည် narcissus မီးသီးများကိုစားသလား။
Q: narcissus ပန်းများသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဘေးကင်းလုံခြုံပါသလား။
ငါတို့ရှိသမျှသည်နွေ ဦး လ၏အစောပိုင်းပန်းပွင့်ကိုချစ်။ သို့သော်ဤအရာအချို့သည်ထိုအလွန်ကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်များထုတ်လုပ်ရန်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်စတင်သင့်သည်။ Narcissus ပန်းများသည်ထိုစာရင်းတွင်မြင့်မားသည်။
Daffodils, jonquils နှင့် narcissus တို့သည်အပင်တစ်မျိုးတည်းမှဆင်းသက်လာပြီးဂရုစိုက်ရန်လွယ်ကူသောအပင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နေရောင်အစက်အပြောက်တွင်တောက်ပ။ လှပသောပန်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးပြီးမျက်စိကိုကြည်နူးစေသည်။ ထို့အပြင်အနည်းငယ်တို့သည်လည်းမွှေးသောရနံ့ကိုပင်ထုတ်လုပ်ကြသည်။
ဆောင်းရာသီအေးပြီးနောက် narcissus ပန်းပွင့်လာကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှား? သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီများပြားလှသောနွေ ဦး အံ့အားသင့်မှုဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုတာအတိအကျသိနိုင်အောင်ဆက်ဖတ်ပါ။
Daffodil စိုက်ပျိုးသူများအတွက်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များ -
ပိုမိုလုံခြုံသော Brand Insect Soap
Neem Bliss 100% အေးဖိအားပေးခံရ Neem Oil
ဥယျာဉ်ကို Safe ပက်ကျိ & ခရုငါးစာ
အဝါရောင် Dual Sticky ယင်ကောင်ထောင်ချောက်
ဒေါက်တာ Pye ရဲ့ Scanmask အကျိုးရှိသော Nematodes
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော narcissus ပန်းများသည်ဥယျာဉ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အပြင်
လူအသုံးအများဆုံးအမည် Narcissus, daffodil, jonquil, daffadowndilly, asphodel, တံပိုးပန်း
သိပ္ပံနည်းကျအမည် မျိုးစုံ Narcissus မျိုးစိတ်
ရေ ဆောင်းရာသီတွင်မြေဆီလွှာစိုစွတ်စေပြီး၊ ကြီးထွားသည့်ရာသီတွင် ၁” ရေဖြစ်သည်
အပူချိန် မီးသီးများသည် ၂၉ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အောက်ရှိအထိခိုက်မခံသောအေးခဲခြင်း၊ ဘူးသီး / အရွက်များကိုသည်းခံနိုင်သည်
ပိုးမွှား Aphids, မီးသီးသွင်း, narcissus မီးသီးယင်ကောင်, ပင်မ nematodes, အနောက်တိုင်းပန်းပွင့် thrips, ခရု & ပတ်ကျိ
ရောဂါများ Basal ပုပ် (ဖန်းဂတ်စ်ဖြစ်စေသောသို့မဟုတ်အစိုဓာတ်ဖြစ်စေသော)၊ botrytis narcissicola, narcissus အဝါရောင်အစင်းဗိုင်းရပ်စ်၊ narcissus mosaic virus၊ narcissus ငုပ်လျှိုးနေသည့်ဗိုင်းရပ်စ်၊
Narcissus အမျိုးအစားသည်အလွန်ကြီးမားပြီး ground coversaa ဤအမျိုးအစားတွင်အပင်များစွာရှိသည်။
အမေရိကန် Daffodil လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်သီးခြားစီခွဲစိတ်မှု ၁၃ ခုကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကွဲပြားမှုသည်များသောအားဖြင့်ပန်း၏အသွင်သဏ္ဌာန်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
Narcissus ပန်းများတွင်အခြေခံအချက်သုံးချက်ပါဝင်သည်။ ပန်း၏နောက်ကျောတွင် hypanthium ကိုတစ်ခါတစ်ရံပန်းပြွန်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဤသည်ပန်းပွင့်ပင်စည်သို့ဝင်သောမှာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Tepals, ဒါမှမဟုတ်ပန်းပွင့်ရဲ့အောက်ခြေကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပွင့်ချပ်, ပန်းပွင့်ရဲ့ Perianth (အခြေစိုက်စခန်း) တွင်အနိမ့်ထိုင်ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်အလယ်ဗဟိုတွင်လူသိများသောပြွန်သို့မဟုတ်တံပိုးပုံသဏ္formsာန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော Corona ဖြစ်သည်။
လူအများစုက narcissus, daffodils, ဒါမှမဟုတ် jonquils တွေကို corona ကနေခွဲခြားသတ်မှတ်ထားကြတယ်။ အချို့မျိုးကွဲများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ထူးခြားစွာပုံသဏ္areာန်ရှိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်လှပသည်!
သေးသေးလေး cultivars အမေရိကန် Daffodil လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကွဲပြားခြင်းမဆိုသို့ကျလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားများအတွက်စိုက်ပျိုးခဲ့ကြ hybrids သို့မဟုတ် crossbreeds ဖြစ်ကြသည်။
Trump Daffodils: ၎င်းတို့တွင် corona (သို့) ပန်းပွင့်၏အလယ်ဗဟိုတွင် 'တံပိုး' ရှိသည်။ အပြင်နံရံတွင်တပွင့်တစ်ပွင့်နှင့်အတူပွင့်ချပ်များရှည်နေသဖြင့်၊
ကြီးမားသောခွက်ဖောများ: အပင်တစ်ပင်မှပန်းတစ်ပွင့်၊ ကြီးမားသော Corona သည်အပြင်ဘက်ဆီလီယာ၏အရှည်ထက်သုံးပုံတစ်ပုံပိုများသည်၊ သို့သော်တိုသည်
အသေးစား - ဖော့ဆေး: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်းတစ်ပွင့်၊ အပြင်ပိုင်း tepals ၏ ၁/၃ ထက်နည်းသောသေးငယ်သော Corona t
နှစ်ဆ Daffodils: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်းတစ်ပွင့်ထက်ပိုသောအပြင်ရူပဗေဒ၏နှစ်ထပ်ကိန်းသို့မဟုတ် Corona သို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။
Triandrus Daffodils: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်းနှစ်ပွင့်၊ Narcissus triandrus ၏ထူးခြားသောပုံစံရှိပြီးအနည်းငယ်သောနောက်ပြန်လှည့်သော Perianth tepals နှင့်အတူ t
Cyclamineus Daffodils: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်းတစ်ပွင့်၊ Perianth tepals များသည် corona နှင့်နောက်ပြန်လှည့ ်၍ Narcissus cyclamineus ကြည့်ခြင်း၊
Jonquilla Daffodils: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်း ၁-၅ ပန်း၊ Corona သည်ခွက်၊ အရိုးသို့မဟုတ်ပုံသဏ္flာန်ရှိသော်လည်းရှည်သည်ထက် ပိုမို၍ ရနံ့ရှိနိုင်သည်။ t
Tazetta Daffodils: အများအားဖြင့်မွှေးကြိုင်သောအပင်တစ်ပင်လျှင်ပန်းပွင့် ၃-၂၀ ရှိသည်။
Poeticus Daffodils: disc ပုံသဏ္ianာန်သို့မဟုတ်တိုတောင်းသော corona ဖြင့်ဖြူသော Perianth tepals များသည် Narcissus poeticus ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်။
Bulbocodium Hybrids: ပင်စည်တစ်ပင်လျှင်ပန်းတစ်ပွင့်၊ များသောအားဖြင့် perianth tepals အနည်းဆုံးနှင့်အလွန်ကြီးမားသော corona
Split-Cupped ကော်လာသို့မဟုတ် Papillon Daffodils: daffodil ၏ကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခု (ကော်လာသို့မဟုတ် papillon) သည် tubed ထက် split corona နှင့်အတူ t
အခြား Daffodil ယဉ်ကျေးမှုများ: အထက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစားများတွင်မပါ ၀ င်သော Narcissi၊ များသောအားဖြင့်အမျိုးအစားမျိုးစပ်များဖြစ်သော
ရုက္ခဗေဒအမည်ဖြင့်သာခွဲခြားသိသော Daffodils: ထူထောင်ဥယျာဉ်ပြင်ပတွင်တွေ့ရှိမျိုးစိတ်များ, ရိုင်းမျိုးကွဲများနှင့်ရိုင်း hybrids တွေကို။
ဒါဟာလှပသောပန်းပွင့်များ၏အဖြစ်အများအပြား 32,000 အဖြစ် cultivars ရှိပါတယ်ခန့်မှန်းပါတယ်။ သို့သော် daffodil နှင့် jonquil အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ထို့အပြင် narcissus နှင့် daffodil ပန်းများအကြားခြားနားချက်ရှိပါသလား။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအဖြေကတော့ jonquils တွေဟာများသောအားဖြင့် Jonquilla ဌာနခွဲထဲကိုကျသွားတယ်။ ပို၍ ရှားပါးသည်မှာ၎င်းတို့အားရိုင်းသောနမူနာများအတွက်ရုက္ခဗေဒအမည်ဖြင့်ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
narcissus နှင့် daffodil ဟူသောဝေါဟာရများသည်များသောအားဖြင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ဒီစည်းမျဉ်းမှခြွင်းချက်တည်ရှိပါဘူး! စက္ကူဖြူ narcissus သည်သာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့သည် narcissus ကိုဘုံနာမည်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်အများစုအတွက်, အသုံးအနှုန်းများကိုအလွယ်တကူလဲလှယ်နေကြသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကဒီဟာကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်တယ်၊ ထို့ကြောင့် narcissus ပန်းများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် cultivar အမည်များကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဒါဟာလမ်းအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ပဲ!
ဤကွက်လပ်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော narcissi နှင့်ပြည့်နှက်နေသည်!
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သင့်ရဲ့ daffodils နှင့် jonquils များသည်စောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျထိုသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့ပြီးတာနဲ့သင်နှစ်ပေါင်းပန်းပွင့်ရပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် daffodil စောင့်ရှောက်မှုလှည့်ကွက်မပါဘဲမဟုတ်ပါဘူး။ daffodil မီးသီးများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်စိုက်ရမည်ကိုသိရှိထားရန်အရေးကြီးသည်။ တိကျသော daffodil အလင်းလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ daffodils များကိုရေလောင်းခြင်းသည်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ကြီးထွားလာ daffodils နှင့် jonquils ၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်ကိုကျော်သွားကြကုန်အံ့!
မြေသြဇာမတိုင်မီ ၂-၄ ပတ်အကြာတွင်သင်၏မီးသီးများကိုဆောင်း ဦး ရာသီ၌စိုက်သင့်သည်။ နွေရာသီရဲ့အပူမှေးမှိန်သွားသည်အထိစောင့်ပါ။
သင်၏မီးသီးများကိုတတ်နိုင်သမျှ ၀ ယ်ပြီးနောက်အမြန်ဆုံးမြေထဲသို့ရောက်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ရှည်လျားလွန်းစွာစောင့်ဆိုင်းခြင်းကသူတို့ကိုစေးလာစေနိုင်သည်။ သငျသညျစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ဆိုပါကတစ် ဦး စဉ်ဆက်မပြတ် 60-65 ဒီဂရီရဲ့ခြောက်သွေ့သော - လေဝင်လေထွက်areaရိယာ၌သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းထား ... ဒါပေမယ့်ရှည်လျားလွန်းစောင့်ဆိုင်းပါဘူး!
နေရောင်ခြည်အများကြီးနဲ့တည်နေရာကိုရွေးချယ်ပါ။ နေရောင်ခြည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာရရှိနိုင်မည်ဆိုပါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်လည်းအဆင်ပြေပါသည်။ တောင်စောင်းနှင့် ထမြောက်တော်မူဥယျာဉ်ကိုကုတင် ပြီးပြည့်စုံသောအရာများဖြစ်သော်လည်းလိုအပ်ပါက၎င်းကိုနက်ရှိုင်းသောကွန်တိန်နာများတွင်လည်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏မြေဆီလွှာကိုပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်သင်၏မီးသီး၏အမြင့်ကိုတိုင်းတာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုအမြင့်နှစ်ဆအဖြစ်စိုက်ရန်သင်လိုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင် ၂ လက်မမီးလုံးရှိလျှင်၎င်းကိုအနည်းဆုံး ၄ လက်မစိုက်ပါ။ ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရွှံ့မြေတွင်စိုက်ပါ။
ပန်းပွင့်တန်ချိန်ကိုရှာဖွေနေပါသလား မီးသီးတွေအများကြီးစိုက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ များစွာသော narcissus ပန်းများသည်ပင်စည်တစ်ခုတည်းကိုသာပန်းပွင့်တစ်ခုသာထုတ်လုပ်သည်။ သင်မည်သည့်အမျိုးအစားကိုစိုက်ပျိုးသည်ကိုသိရန်သေချာပါစေ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူသည်မီးသီးများကိုကြိုတင်အအေးမပေးလျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်၏မီးသီးများကိုလေဝင်လေထွက်အိတ်တစ်လုံးတွင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိုလှောင်ထားပါ။ စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါသည်အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကို ၄၀-၅၀ ဒီဂရီအကွာအဝေးတွင်မထားမီ ၁၂-၁၆ အပတ်များတွင်ထားပါ။
ဤအ jonquils paperwhite အမျိုးမျိုးဖြစ်ကြသည်။
နေရောင်အပြည့်သည် narcissus ပန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အချို့မျိုးကွဲများသည်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၆ နာရီနေရောင်ရသဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်ကိုလည်းသည်းခံနိုင်သည်။
ဤအပင်များအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အအေးသည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်သူတို့သည်ကနေဒါနယ်စပ်အထိတစ်လျှောက်လုံးကြီးထွားလာသည်။ နွေ ဦး ရာသီတွင်ပန်းပွင့်ရန်အတွက် narcissus ပင်အားလုံးသည်အအေးပမာဏလိုအပ်သည်။ သူတို့ကအေးအပူချိန်နေသားတကျပါပဲ။
အကောင်းဆုံးနှစ်ရှည်ကြီးထွားမှုကို USDA ဇုန် ၄-၈ တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းဖြင့်၎င်းကိုဇုန် ၃-၉ အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။ ဇုန် ၁၀-၁၁ တွင် narcissi သည်နှစ်စဉ်အပင်များအဖြစ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သော်လည်းအအေးခန်းလိုအပ်သည်။
အေးသောအပူချိန်များသည်မီးသီးများကိုမသတ်နိုင်သော်လည်း ၂၉ ဒီဂရီအောက်ရှိအပူချိန်များသည်စက်ရုံကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့အပင်များကိုစောစီးစွာကြီးထွားစေသည့်“ မှားယွင်းသောနွေ ဦး ပေါက်သည့်အခြေအနေ” ရှိပါကသတိထားပါ။ ရုတ်တရက်အအေးမိခြင်းသည်ဘူးသီးများသို့မဟုတ်ပန်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ထိုအအေးဒဏ်မှကာကွယ်ခြင်းသည်လွယ်ကူသည် အအေးဘောင်ကို install လုပ်ပါ ။ သင့်တွင်အအေးဘောင်မရှိပါကသင်၏အပင်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသည့်လောင်းကြေးအချို့ကိုအိပ်ရာထဲတွင်ထားပါ။ ပလပ်စတစ်စာရွက်တစ်ရွက် (သို့) ဟောင်းနွမ်းသောအိပ်ရာခင်းတစ်ခုကိုသစ်ပင်များပေါ်တွင်ထိ မိ၍ အပင်များကိုမထိစေပါနှင့်။ ဤသည်မြေပြင်နွေးထွေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကူညီပေးသည်။
သင့်ရဲ့အပင်အောက်ခြေမှာ Mulching ထို့အပြင်မြေပြင်နွေးထွေးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ၎င်းတွင်သင်၏မီးသီးများကိုအလွန်အမင်းအေးသောအခြေအနေများမှကာကွယ်ရန်ထပ်ဆောင်းအပိုဆုတစ်ခုရှိပါသည်။ ဆောင်းရာသီအလွန်အေးသောဒေသများ၌သင်ရောက်နေလျှင်ဤသည်မှာတကယ့်အကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်ရဲ့ daffodils ရေလောင်းလွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့ကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ဒါကိုစူပါရိုးရှင်းအောင်လုပ်ကြပါစို့။
သင်၏ narcissus မီးသီးများကိုပထမဆုံးစိုက်သောအခါရေနက်သည်။ ၎င်းသည်မီးသီးများပတ်လည်ရှိမြေဆီလွှာသည်စိုစွတ်သော်လည်းသေချာသည်။ စိုစွတ်အောင်ထားပါ။
သင်၏အပင်များအရွက်နှင့်အဖူးများထွက်လာသည်နှင့်အမျှသင်၏ရေကိုကြိမ်နှုန်းတိုးစေပါ။ အဲဒီအချိန်မှာတစ်ပတ်ကိုတစ်လက်မလောက်ပေးသင့်တယ်။ ဤသည်သည်သင်၏ကြီးထွားလာသောအပင်များအတွက်လုံလောက်သောအစိုဓာတ်ဖြစ်သင့်သည်။
နံနက်ခင်း၌သင်၏ narcissus ပန်းများကိုသာရေလောင်းပါ၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အပင်များနေ့ကိုစောစောသောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူတို့ကိုင်ထားသည့်ပေါင်းထည့်လိုက်သောအစိုဓာတ်သည်စက်ရုံ၏ဆဲလ်နံရံများကိုဖြည့်တင်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရုတ်တရက်အေးခဲနေသောအခြေအနေများမှအကာအကွယ်ထပ်မံပေးသည်။
narcissus ပန်းပွင့်များအတွက်ရေနုတ်မြောင်းသည်အဓိကဖြစ်သည်။ သင်၏မီးသီးများတစ်ဝိုက်တွင်ရေပိုလျှံနေခြင်းသည်ပုပ်ခြင်းအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်အနည်းဆုံး ၁၂″ အနက်ထိမြေဆီလွှာကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သင်၏ကုတင်များကိုပြင်ဆင်ပါ။ အလုပ်တစ်ခု အရည်အသွေးမြင့်ဆွေး , သင်သည်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်သည်အခြားမြေဆီလွှာလျှော့ပေးရေးထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ် ဦး ကကောင်းစွာ - ယိုစီး မြေဆီလွှာရောစပ် potting အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်
မြေဆီလွှာ၏ pH အတွက်အကွာအဝေး 6.0 နှင့် 7.0 အကြားဖြစ်သင့်သည်။ Narcissus နည်းနည်းပိုအက်ဆစ်မြေဆီလွှာကိုကြိုက်တယ်။ အကယ်၍ သင်၏မြေဆီလွှာသည်အယ်ကာလိုင်းသို့ ဦး တည်သွားလျှင်၊ သင်သည်မြေဆီလွှာရှိဆာလဖာသို့မဟုတ်အခြားအက်ဆစ်ဂျင်အက်တမ်များနှင့်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သေချာအောင်လုပ်ပါ မြေဆီလွှာကိုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ပါ သင်ကပြင်ဆင်မတိုင်မီ!
ဤအ jonquils တိုတိုနှင့် ruffled corona မီးတောက်ထဲတွင် tepals နှင့်အတူရှိသည်။
နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာသည် narcissus ပန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည်မြင့်မားသောသစ်ရွက်များ၏ကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ လှပသောအပွင့်များတည်ဆောက်ရန်ထိုအပင်များသည်ဖော့စဖောရက်နှင့်ပိုတက်စီယမ်လိုအပ်သည်။
သင်၏အရွက်များပေါ်လာသည့်အခါအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်၊ ၅-၁၀-၁၀-၁၀ မြေသြဇာကိုသုံးပါ။ သင်သည်အဟောင်းများကိုစိုက်ခင်းများအတွက်ဒီဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်, သို့မဟုတ်ရုံအသစ်များများအတွက်မြေဆီလွှာ၏ပထမလက်မသို့မဟုတ်ဒီတော့သို့အနည်းငယ်ခြစ်ရာ။
သင်၏အပင်စတင်ပန်းပွင့်သောအခါ ၀-၁၀-၁၀-၁၀ အထက်ဝတ်ဆင်ထားသောဓာတ်မြေသြဇာဖြင့်ဖြည့်စွက်ပါ။ ဒီဓာတ်မြေသြဇာနှစ်ခုကိုရာသီအတွက်လုံလောက်စေသင့်တယ်။
daffodils ပန်းပွင့်သောအခါမြေသြဇာကောင်းသောပန်းများသည်မျိုးစေ့များထွက်လာလိမ့်မည်။ ထိုမျိုးစေ့များကိုတစ်ချိန်ကစိုက်ပြီးပန်းပွင့်ရန်ငါးနှစ်ခန့်ကြာနိုင်သည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ဒါကရှည်လွန်းပြီးနှေးကွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။
မီးသီးခွဲခြားခြင်းသည် ပို၍ များသောအရာဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်သောမီးသီးများသည်သူတို့၏မိခင်စက်ရုံ၏ကိုယ်ပွားများကိုထုတ်လုပ်ကြသဖြင့်၎င်းသည်မျိုးစေ့များထက်များစွာ ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ မျိုးစေ့များ ၀ တ်မှုန်ကူးခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော hybrids များကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
ruffled corona နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အဝါရောင် daffodils ။
ခွဲခြား daffodils တိုင်း 3-5 နှစ်ကြာဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး။ မီးသီးများထဲမှ narcissus ပန်းများသည်လူစည်ကားရာနေရာများကိုပိုမိုလက်ခံရန်လေ့ရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ဥယျာဉ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အပင်အသစ်များကိုအခမဲ့ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည်သင်တက်ကြွစွာပန်းမပွင့်သောအချိန်မရွေးမီးသီးများကိုခွဲနိုင်သည်။ ငါကမီးသီးအခြေစိုက်စခန်းနေရာချထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူကြောင့်အရွက်နေဆဲပူးတွဲနေစဉ်ငါကလုပ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သစ်ရွက်များသည်တက်ကြွ။ အစိမ်းရောင်ရှိနိုင်သည်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏ daffodils တဝိုက်မြေဆီလွှာကိုဂေါ်ပြားဖြင့်ဖြေလျှော့ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ မီးသီးများသို့မဟုတ်သူတို့၏အမြစ်စနစ်များကိုမတော်တဆမဖြတ်မိစေရန်သတိပြုပါ။ သငျသညျအနည်းဆုံး 12 the မြေဆီလွှာရဲ့မျက်နှာပြင်အောက်တွင်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မြေဆီလွှာသည်စက်ရုံပတ် ၀ န်းကျင်၌ချောင်ကျသည်နှင့်တပြိုင်နက်လျှောချပါ ဂေါ်ပြား ထိုမီးသီးအောက်။ သတိဖြင့်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လျော့ရဲခြင်း၊ ထို့နောက်သင်ကမီးသီးများထုတ်ဖေါ်ဖို့ပိုလျှံမြေဆီလွှာကိုပယ်ဖုန်နိုင်ပါတယ်။
သေးငယ်သောမီးသီးများမပွင့်မီနှစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားနေဆဲသစ်ရွက်များထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အတော်လေးလှပနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျသူတို့ကိုကွက်အိတ်သို့မဟုတ်သိုလှောင်နိုင်ပါတယ် ခြောက်သွေ့ပေါ်ရှိသစ်ဆွေးရေညှိ သူတို့မထိမှီတိုင်အောင်၊ သူတို့ပုပ်သို့မဟုတ်သွေ့ခြောက်ခြင်းမရှိကြသည်သေချာစေရန်မှန်မှန်သူတို့ကိုစစ်ဆေးပါ။ သူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာချက်ချင်းပြန်လည်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
ပို၍ ကြီးမားသောမီးသီးများအတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းနွေ ဦး ရာသီတွင်သေးငယ်သောပန်းများထက်ပန်းပွင့်များသည်။ ၎င်းတို့ကိုခြောက်သွေ့သောသစ်ဆွေးရေညှိသို့မဟုတ်ကွက်လပ်အိတ်များ၌သိုလှောင်ပါသို့မဟုတ်ချက်ချင်းပြန်လည်စိုက်ပျိုးပါ။
မူလမိဘမီးသီးကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ ၎င်းသည်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းလက္ခဏာများပြလျှင်၎င်းကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုး။ မရ။ ၎င်းသည်အခြေအနေကောင်းနေပုံရလျှင်၎င်းကိုပြန်လုပ်။ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးပါ၊
ကြီးထွားရန်လွယ်ကူပြီး၎င်းသည်မည်သည့်ဥယျာဉ်ကိုမဆိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောပြသပေးနိုင်သည်။ ရင်းမြစ်: Leslie Kirkland
အနည်းဆုံးမြေမျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၂ with ရှိသောကွန်တိန်နာများကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်အမြစ်နေရာနှင့်မီးသီးများနေရာများစွာရရှိစေသည်။ အကယ်၍ ကွန်တိန်နာများကြီးထွားလာပါက၎င်းတို့ကိုမကြာခဏရေလောင်းပါ။ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ, narcissus ပန်းပွင့်များအတွက်လိုအပ်သော In- ရာသီတံစဉ်များကိုအနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။ သင်လိုချင်လျှင်ကုန်လွန်ခဲ့သောပန်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ပင်စည်ကိုနဂိုအတိုင်းထားပါ။
သင်၏အပင်များကိုအဝါရောင်ပြောင်း။ သေဆုံးသည်အထိမဖြတ်ရန်ကြိုးစားပါ။ Daffodils များသည်ဆောင်းတွင်းအိပ်ချိန်အတွင်းရှင်သန်ရန်အာဟာရများကိုသိုလှောင်ရန်သူတို့၏အရွက်များကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့အဝါရောင်င့်တိုင်အောင်, စက်ရုံအာဟာရအားလုံးထုတ်ယူခြင်းနှင့်မီးသီး၌သူတို့ကိုသိမ်းထားတဲ့မထားပါဘူး။
အပင်သည်အဝါရောင်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အရွက်အားလုံးကိုမြေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အသုံးပြုပါ မြုံတံစဉ်များကိုညှပ် ဒါကြောင့်စင်ကြယ်သောဖြတ်စေသည်အဖြစ်ဤရည်ရွယ်ချက်သည်။ မြေဆီလွှာအောက်၌မဖြတ်ပါနဲ့။
အချို့လူများကရာသီကုန်သစ်ရွက်များကိုညှပ်ရန်မြက်ရိတ်စက်ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ကြပြီး၎င်းသည်လည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ သငျသညျအပင်ပတ်လည်မှာ mulch ရရှိပါသည်လျှင်, mulch ရိုက်တားဆီးဖို့2than အောက်ထက်နည်းနိမ့်မှာ mower ထားပါ။ သစ်ရွက်သေကောင်ကိုကြိတ်ရန်ရွေးချယ်ပါက mulch ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဤ daffodils များပေါ်တွင်တံပိုးခရာကဲ့သို့သော coronas သည်ထင်ရှားပြီးလှပနေ၏။
Narcissus ပန်းများသည်အစပြုသူအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးသောအပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကြီးထွားရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်အလွန်ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါခံနိုင်ရည်ဖြစ်လေ့! သို့သော်လက်တစ်ဆုပ်စာပြoccurနာဖြစ်နိုင်သည်။ ရဲ့ယခုသူတို့အားကျော်သွားကြကုန်အံ့။
သေးငယ်တဲ့မီးသီးများ ပန်းမပွင့်ပါစေနဲ့ ပထမစုံတွဲနှစ်များတွင်။ ထိုမီးသီးသည်သကြားနှင့်အခြားအာဟာရများကိုသိုလှောင်ရန်အချိန်လိုသည်။ ဤအမှုကြောင့်သင်သည်သစ်ရွက်သစ်ရွက်များပေါ်ထွက်လာဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်ပန်းများမရှိပါ။ သို့သော်ပိုကြီးတဲ့မီးသီးများပန်းပွင့်နိုင်သင့်သည်။ ပန်းမပွင့်မီနိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်မြေသြဇာနည်းသောအ ၀ တ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ရန်အကြံပြုသည်။
မင်းမြင်နေလား ညံ့သောအရွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နွေဦးရာသီမှာ? သို့ဆိုလျှင်၎င်းသည်သင်ယခင်နှစ်အစောပိုင်းကအရွက်များကိုဖယ်ရှားလိုက်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းအဝါရောင်ရင့်သည်အထိအရွက်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်အမြဲစောင့်ပါ။ မီးသီးက၎င်း၏အာဟာရများကိုပြန်လည်စုပ်ယူခွင့်ပြုသရွေ့သင်၏စက်ရုံသည်နောက်နှစ်တွင်တိုးတက်သင့်သည်။
အစိမ်းရောင်မက်မွန် aphids , foxglove aphids နှင့်အခြားမျိုးကွဲအချို့သည် daffodils ကိုစားသုံးကြောင်းသိရသည်။ အစာကျွေးခြင်းကအပင်ကိုမသတ်နိုင်သော်လည်း aphids သည်ရောဂါများကိုမကြာခဏပျံ့နှံ့စေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပိုးသတ်ဆေးဆပ်ပြာ ပိုဆပ်ပြာ aphids ဖယ်ရှားခြင်းအဘို့ကြီးစွာသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။
မီးသီးသွင်း လှည့်စားကြသည်။ ဒီစိတ်တိုစရာကောင်းတဲ့ကုသနည်းတွေမရှိဘူး။ လူကြီးများသည်ဥများကိုဥများမြေဆီလွှာတွင် တင်၍ လောင်းလောင်းများပေါက်သည့်အခါမီးသီးများထဲသို့ထည့်သည်။ ၎င်းသည်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါများကိုဝင်ရောက်စေသည့်ပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မစိုက်ပျိုးမီသင်၏မီးသီးများကိုစစ်ဆေးပါ နှင့်မည်သူမဆိုပျော့ပျောင်းသို့မဟုတ်အလင်းဖိအားမှလိုက်လျောလျှင်, သူတို့ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါ။ ဤသည်သွင်းပျံ့နှံ့တားဆီးကူညီပေးသည်။
The narcissus မီးသီးယင်ကောင် နောက်ထပ်အဓိကပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မီးသီးများကဲ့သို့ဥများဥများကိုဥများဥများကျက်စားရာမှလောင်းကျွေးသည်။ လူကြီးများသည်သေးသေးလေးနှင့်တူပြီးအလွယ်တကူပိတ်မိနိုင်သည် အဝါရောင်စေးကပ်ထောင်ချောက်လောင်းကြေး ။ သင်၏မီးသီးများကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာစိုက်ပျိုးခြင်းသည်ပိုးလောင်းပြန့်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့အပင်ပတ်လည်မှာ Mulching မီးသီး mite နှင့်မီးသီးယင်ကောင်ကူးစက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြေဆီလွှာကိုအညီအမျှစိုစွတ်အောင်ကူညီပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
nematodes အဓိကအားထား မီးသီးပေါ်တွင်အရွက်များနှင့်တွေ့ရှိရပါသည်အရောင်ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်။ အကျိုးရှိသော nematodes လျှောက်ထား မြေဆီလွှာထဲသို့ဤဏုအန္တရာယ်များပပျောက်ရေးကူညီနိုင်သည်။
သူတို့ narcissus ပန်းပွင့်အပေါ်လျော့နည်းဘုံနေနေစဉ်, အနောက်တိုင်းပန်းပွင့် thrips ပေါ်လာနိုင်တယ် ဤသူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အရွက်များနှင့်ပန်းပွင့်ပွင့်ချပ်များကိုစားသုံးလေ့ရှိသည်။ က အရည်အသွေးပိုးသတ်ဆေးဆပ်ပြာ သူတို့ရဲ့အရေအတွက်ကိုလျှော့ချကူညီနိုင်သည်။ neem ဆီဖြန်းသည် သူတို့ရဲ့ပြန့်ပွားတားဆီးနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး၌သင်၏ daffodil သစ်ရွက်တွင်သူတို့၏အိမ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သောပိုးမွှားများစုံတွဲတစ်တွဲရှိသည်။ ဘုံခရုများ နှင့် ဥယျာဉ်ပတ်ကျိ သင်၏အပင်များကိုဝါးနိုင်သော်လည်းအခြားသူများကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောငါးစာကိုသုံးပါ ဥယျာဉ်ကို Safe ပက်ကျိ & ခရုငါးစာ သင့်ဥယျာဉ်၏ကျန်ကိုမပျက်စီးစေခင်၎င်းတို့ကိုသုတ်ပစ်ရန်။
တိုတောင်းသော coronas နှင့်အတူသီးခြား narcissi ။
narcissus ပန်းများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ရောဂါများမှကင်းလွတ်သည်။ သို့သော် aphids ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ် ။ အင်းနှင့်ယင်ကောင်များသည်ပွင့်လင်းသောပျက်စီးသည့်နေရာများမှထွက်ခွာသည် ကြောင်းဖန်းဂတ်စ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။
Basal ပုပ်အဓိကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပိုးမွှားပျက်စီးမှုကိုခွင့်ပြုနိုင်သည် pythium , rhizoctonia သို့မဟုတ် fusarium မှို ထိုမီးသီးကိုလိုနီရန်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌မီးသီးကိုသေစေပြီးသင်၏မြေဆီလွှာထဲသို့ထပ်မံပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။
ပုပ်ပျက်စီးခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ရေ ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမြေဆီလွှာသည်မှိုများကိုအပင်တစ်ဝိုက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားစေသည်။ သင်၏အပင်များသည်ပိုးမွှားကင်း။ ကောင်းမွန်စွာညှစ်နေသောမြေတွင်ဖြစ်လျှင်ပုပ်မဖြစ်သင့်။
The narcissus အဝါရောင်အစင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါ aphids မှတဆင့်ပြန့်နှံ့။ ဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အရွက်များကိုအဝါရောင်နှင့်ညှိုးနွမ်းစေပြီးမီးသီးကိုပျော့ပျောင်းစေပြီးဖန်းဂတ်စ်ပုပ်မှထွက်စေနိုင်သည်။ ကုသမှုမရှိပါကကာကွယ်ခြင်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုဖြစ်သည်။
အခြား virii များသည်လည်း narcissus အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအထဲကတချို့ပါဝင်သည် narcissus mosaic ဗိုင်းရပ်စ် , ငုပ်လျှိုးနေဗိုင်းရပ်စ် narcissus နှင့် narcissus ယိုယွင်းဗိုင်းရပ်စ် ။ ဒါဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 ကွဲပြားခြားနားသောဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲတည်ရှိစေခြင်းငှါခန့်မှန်းပါတယ်။ အရွက်များနှင့်ပင်စည်များ၊ ပုရွက်ဆိတ်ပုရွက်များနှင့်အရွက်အစွန်အဖျားအပါအဝင်ရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုးရှိသည်။
အဝါရောင်အစင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကဲ့သို့ပင်ယင်းတို့အားလုံးကိုမကုသနိုင်ပါ။ ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အပင်များကိုသင်ဖျက်ဆီးသင့်သည်။ သင်၏မူးယစ်ဆေးဝါးတွင်ကူးစက်ပျံ့နှံ့စေသောပိုးမွှားများကိုရှောင်ရှားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့အား aphids ဝေးဝေးထားပါ!
Botrytis narcissicola ဆွေမျိုးတစ် ဦး botrytis cinerea , ထိုမီးသီးတိုက်ခိုက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ မီးသီးများကိုအိမ်တွင်း၌သိုလှောင်ထားသောအခါ၎င်းသည်အများအားဖြင့်ဖြစ်သည် narcissus မီးခိုး ။ သိုလှောင်ထားသောမီးသီးတစ်လုံးကူးစက်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဖျက်ဆီးသင့်သည်။ အစောပိုင်းရောဂါလက္ခဏာပြနေသည့်မြေပေါ်ရှိအပင်များကို (a) ဖြင့်ကယ်တင်နိုင်သည် အရည်ကြေးနီ sulfate မှုန်ရေမွှား ။
အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြစ်စေ narcissus ပန်းများသည်အရောင်တောက်တောက်ဖြစ်သည်။
A: narcissus ပန်းပွင့်များ၏မီးသီးများတွင်သဘာဝအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်သောအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောပုံဆောင်ခဲများပါ ၀ င်သည်။ အနည်းငယ်သောအင်းဆက်ပိုးများသာ၎င်းတို့ကိုစိတ်ချစွာစားသုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကြွက်မသည်သင့် narcissus မီးသီးများကိုစားလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။
A: narcissus မျိုးစိတ်အားလုံးတွင် alkaloid ဒြပ်ပေါင်းများပါ ၀ င်ပြီးအဆိပ်ဖြစ်စေသည်။ မီးသီးများသည်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်သော်လည်းစက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။
ကြောင်များနှင့်ခွေးများကဲ့သို့သောအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူဆေးပမာဏအနည်းငယ်သည်အော့အန်ခြင်း၊ တံတွေးနှင့်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကြီးမားသောဆေးများသည်တက်ခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်နှလုံးမမှန်ခြင်းများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ မြင်းများကဲ့သို့သောမွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များသည်အချို့သောသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြင်းထန်သောတုံ့ပြန်မှုနည်းသော်လည်းလူသားများသည်ထိုအပင်များနှင့်မကင်းပါ။ မူးဝြေခင်း၊ အစာအိမ်နာကျင်ခြင်း / စိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်ရှားပါးစွာသန္ဓေတည်ခြင်းသည် narcissus ကိုမျိုချမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအမှုအရာကြောင့်တစ် ဦး အဘို့အကောင်းတစ် ဦး ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အန္တရာယ်ကင်းသောဥယျာဉ် သို့မဟုတ်ကလေးဘေးကင်းသောဥယျာဉ်တစ်ခု။ သင်၏အပင်များနှင့်အလုပ်လုပ်စဉ်လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ လက်အိတ်များသည်သင့်အားသစ်သီးသို့မဟုတ်အပင်အစိတ်အပိုင်းများကိုမတော်တဆစားမိခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
အားလုံးပြောနှင့်ပြုမိသောအခါ, သင့်ခြံထဲသို့ narcissus ပန်းပွင့်ထည့်သွင်းအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံး jonquil cultivar သို့မဟုတ် daffodil ပန်းပွင့်ကဘာလဲ? သူတို့ကိုမင်းတို့က narcissus ပန်းတွေဒါမှမဟုတ် daffodils လို့ခေါ်တယ်။ သင့်ရဲ့ပုံပြင်တွေကိုမှတ်ချက်အပိုင်းမှာပြောပြပါ။
Peperomia Obtusifolia: Pretty Little Pepper မျက်နှာ
စီးပွားဖြစ် Hydroponics စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည် - Vitalii Jidkov နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
Cress Microgreens ကြီးထွားနည်း
အထွေထွေ Houseplant စောင့်ရှောက်မှု
2 အပင်များအတွက်မည်မျှ cfls
1- ထွက်ပေါက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေ timer ကိုပတ်လမ်း
မြေဆီလွှာကိုတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ဥယျာဉ်ကို tool ကို